Fiovan'ny làlan-jotra sy làlan'ny tetezana | RayHaber
HomeTORKIAFaritra Marmara34 IstanbulFiovana eny amin'ny làlan'ny làlambe sy ny tetezana
07 / 11 / 2019 34 Istanbul, ANKAPOBENY, Rohibe, Highway, Headline, Faritra Marmara, TORKIA
fiovana amin'ny vidin'ny lalam-by sy ny tetezana
Fiovana eny amin'ny làlan'ny làlambe sy ny tetezana; Miaraka amin'ny modely "vidin-tariby" nomanin'ny Ministeran'ny Fitaterana sy ny fotodrafitrasa handalovana amin'ny làlambe sy ny tetezana, ny olom-pirenena dia mampiasa ny lalana lafo mora kokoa amin'ny andro sy ora sasany. Araka ny hamafin'ny fangatahana amin'ny alàlan'ny fampiakarana na hampihenana ny karama dia azo atao tsara, na dia kely aza ny tinady, afaka mampiasa tetezana sy làlambe mora kokoa ny olom-pirenena.
maraina 'Araka ny fitantaran'i Tan Bariş Şimşek; Ny Programme an'ny 2020 isan-taona Programme dia nametraka fitsipika vaovao momba ny saram-pomba sy haba. Ao amin'ny modely mavitrika amin'ny varotra mavitrika, izay ampiasaina any Eropa ihany koa, ny fitakian'ny mpampiasa dia arahana miaraka amin'ny rindrambaiko manokana ho an'ny ora 7 andro 24. Ny paikady vidin'ny varotra ihany koa dia mety miovaova arakaraka ny hamafin'ny fahatsapana na ny tsy fahampian'ny fangatahana amin'ny alàlan'ireto rindrambaiko ireto. Miaraka amin'ny fomba mitovy ampiasain'ny orinasam-piaramanidina dia mikasa ny hampiasana azy mora kokoa amin'ny fotoam-pivoriana tsy misy fatiantoka.
TOROHEVITRA, FANAOVANA AZY HANOVANA NY SEKTOR
Ny fanapahan-kevitra mifandraika amin'ny asa tokony hatao amin'ny làlambe dia tafiditra. Araka izany, ny serivisy fanamboarana sy fanamboarana ny tamba-jotra eny an-dàlana amin'ny alàlan'ny fanatanterahana ny sehatra tsy miankina amin'ny alàlan'ny fifanarahana mifototra amin'ny asa ilaina amin'ny fanatanterahana ny fandaminana ara-dalàna sy ny andrim-panjakana.
Ny rafitry ny fotokevitra, fandaharan'asa ary ny famolavolana ny rafitry ny andrim-panjakana ho an'ny fananganana rafi-bola izay tompon'andraikitra fotsiny amin'ny fiarovana ny fitohanan'ny làlana dia ho vitaina hahazoana antoka fa ny fiarovana ny fifamoivoizana dia miorina amin'ny alàlan'ny fomba fiasa azo antoka. Hofoanana ny tetik'asa very noho ny laharam-pahamehana sy ny fahafaha-manao azy.
Fampiononana tsy an-kiato arifomba eo amin'ny tetezana roa
Tetezana sy tetezan'ny làlambe
2 ho an'ny tetezana sy ny lozam-pifamoivoizana. fanambarana
Tranom-bola 107 Milanja sy Highway vola Very
CHP Special: "7.9 ao amin'ny làlan'ny làlambe sy ny tetezana"
Fanitsiana ny lahatsoratra momba ny sazy sy ny lalamby Kanun
Tetezana, seranam-piaramanidina sy fiarabe fitateram-bidy no hatsangana?
2019 Tsy misy Bridge sy Fiaramanidina Mitandrema
Tondron'ny tetezana sy ny lalam-be
Ireto ny fitomboan'ny vidiny! .. New Highway Ulaş
Antalya Bus Lines novaina
Fiovàna goavana eo amin'ny làlana Antalya, AC03 Bus Line
Fiovan'ny mpiasa TCDD Published in Gazety Ofisialy
Ao amin'ny Lara fitateram-bahoaka City Kahramanmaras…
3. Fiovan'ny tselatra eny amin'ny seranam-piaramanidina ...
Fiovana amin'ny vidin'ny tetezana
Fiovana amin'ny vidin'ny làlambe
Torkia ny lalana Network
Tiorkia tetikasa goavana any amin'ny iraisam-pirenena Awards